Usoro ọgwụgwọ anụ ahụ ọ dị mma maka mgbu ikpere? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Usoro ọgwụgwọ anụ ahụ maka ikpere - esi edozi
Usoro ọgwụgwọ anụ ahụ maka ikpere - esi edozi
Usoro ọgwụgwọ anụ ahụ ọ dị mma maka mgbu ikpere?
Usoro ọgwụgwọ anụ ahụnwere ike inye aka belatamgbu, ọzịza, na isi ike nkeikpereọrịa ogbu na nkwonkwo, ọ pụkwara inye aka meliteikpere ikpereọrụ. O nwekwara ike ime ka ọ dịrị gị mfe ije ije, hulata, gbuo ikpere n’ala, nọrọ ọdụ. g.
Kedu ihe ha na-eme na ọgwụgwọ anụ ahụ maka ikpere?
Quad na-agbatị ụkwụ kwụ ọtọ.
Short aak quads.
Omume iji wusi úkwù gị (mọzụlụ hip gị na-enyere aka ịchịkwa ọnọdụ gịikpere. Adịghị ike ebe a nwere ike ibuteikperemgbu.)
Ọkpụkpụ ala na-agbatị.
Kedu usoro ọgwụgwọ kachasị mma maka mgbu ikpere?
Nlekọta onwe onye maka onye merụrụ ahụikperegụnyere:
Ezumike Wepụ ezumike site na mmemme gị iji belata nrụgide ugboro ugboro na gịikpere, nyemmerụ ahụoge iji gwọọ ma nyere aka gbochie mmebi ọzọ.
Akpụrụ. Ice na-ebelata abụọmgbuna mbufụt.
Ọnwa Ise 11, 2021
Ekele m gị, ọ bụ Dọkịta Jo, ma taa, m ga-egosi gị usoro ọgwụgwọ asaa kachasị mma m nwere maka ikpere mgbu. Ya mere, ka na-amalite. Dịka ị pụrụ ịhụ, m na-eyi ihe nkwado n'ikpere, ma aga m ekwu maka nke a obere oge.
Ya mere aga m aga n'ihu wepụ ihe a ma bido ụfọdụ ọgwụgwọ. Ihe mbụ nke ga-abụ moba patella ma ọ bụ mobs kneecap, na ihe kpatara nke a bụ ọgwụgwọ dị mkpa, bụ n'ihi na a na-etinye ikpere ikpere na tendon quad na tendon patellar, na mgbe ahụ quad muscle dị n'elu. Yabụ mgbe ndị a siri ike, ọ na-etinye nrụgide na esemokwu dị ukwuu na ikpere ikpere nke na-eme ka ọ banye na nkwonkwo.
Ka ị nwere ike imegharị ikpere ikpere gị, obere nrụgide na mgbu na ikpere gị. Yabụ nke a bụ otu ihe ụfọdụ ndị mmadụ kpọrọ asị maka mmeghari a. ọ na-akpali ya ntakịrị nzuzu ka ị nwee ike ime ya n'onwe gị, mana ị ga-enwe ahụ iru ala kpamkpam.
Y’oburu na ichoro mmadu mee gi ihe a, odi nma. Yabụ were mkpịsị aka gị, chọta ikpere ụkwụ gị, na mgbe ụfọdụ ọ nọ ebe dị iche karịa nke m dabere na ụdị ahụ gị, mana tinye mkpịsị aka gị n'akụkụ nke ọ bụla wee banye n'akụkụ n'akụkụ. Ya mere ị nwere ike ịhụ na ikpere m na-agagharị nke ọma n'ihi na enweghị m nsogbu ikpere ọ bụla, mana ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ihe mgbu ma ọ bụ nwee mmerụ ahụ, ọ nwere ike ọ gaghị agagharị nke ukwuu.
Mana ihe ị chọrọ ime bụ ijide n’aka na ị pịghị aka ka ị na-ahapụ. Naanị ị na-aga site n'otu akụkụ ruo n'akụkụ n'ihi na mgbe ị na-agbada, ị na-adọkpụ ikpere ikpere na nkwonkwo. na ị nwere ike ịkwanye ike ọ gwụla ma ịnwere mmerụ ahụ dịka ikpere ụkwụ na-enweghị isi nke ga-abụ ihe ị na-achọghị ịnọgide na-agbanye.
Mana ọ bụrụ na ị na-enwekarị ikpere ikpere, ị nwere ike ịkwanye ike iji mee ka ihe a na-agagharị. Ya mere, gaa site n’akụkụ ruo n’akụkụ ntakịrị, wee nwee ike iwere mkpịsị aka gị na mkpịsị aka gị wee gbagoo wee gbadaa. Ma otu ihe ahụ, m na-eme njem a.
Agaghị m enweta ya n’ihi na ọ na-akpali ikpere ikpere na nkwonkwo ahụ. elu na ala ọzọ, site n'otu akụkụ gaa n'akụkụ. Nwere ike ịgbanwee ma laghachi ma mee nke a maka nkeji ole na ole.
Oge izizi ị mere ya, ị nwere ike chọọ ịme ya naanị 30 sekọnd, mana ọ bụrụ na ọ na-egbu mgbu ị chọghị ime ya. Ma ọ bụrụ na ọ na-erughị ala na-aga n'ihu na-ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ike nweta ya na-akpụ akpụ n'ihi na mgbe ị na-amalite na-akpụ akpụ ya na mgbe ahụ ọ na-akawanye n'ezie mobile na nke ahụ dị mma. nke a bụ ihe ị chọrọ.
Chọrọ ikpere ikpere ụkwụ ka ọ see n'elu, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ka ọ ghara ịnọdụ ala n'ebe ahụ n'apata apata ụkwụ. Yabụ, ozugbo i mechara ụdị ịtọghe na ịgbatịpụ, ị nwere ike ibido site na mmemme isometric. Ihe ozo anyi gha abanye bu quad set.
Quad set dị ezigbo mma n'ihi na ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ikpere ikpere, nke a bụ nzọụkwụ mbụ na mgbatị ebe ị naghị eme nnukwu mmegharị nke nwere ike na-egbu mgbu, mana ị malitere ime ka akwara ndị ahụ rụọ ọrụ ọzọ. na akwara quad dị ezigbo mkpa na ikpere ikpere anyị na ikpere ikpere anyị ka ịchọrọ ị nweta ya. na mgbe ị nwere ihe mgbu ma ọ bụ mmerụ ikpere, quads na-akwụsị ịgba egbe.
Ọ na-amasị m iji obere elekere n'okpuru ikpere m. Nwere ike iji obere ụfụfụ na-agba ụfụfụ dị ka nke a, nke a bụ naanị ọdọ mmiri ọdọ mmiri, mana ị nwekwara ike ịpịgharị akwa nhicha. Nwere ike ime ya na ikpere gị zuru oke, mana ọ dị m ka ọ na-arụ ọrụ ntakịrị karịa mgbe ị nwere ihe mgbaru ọsọ n'uche.
Chọghị ya ka ọ dị elu n’ezie maka na ikpere chọrọ ka ikpere gị kwụrụ ọtọ, mana okwesighi ịkwụ ọtọ. na ihe niile ị ga - eme bụ nkwekọrịta ma ọ bụ mee ka eriri gị nwee ike ịgbalị ikpere ikpere gị. Isi ihe abụghị ibuli ikiri ụkwụ gị.
Mgbe ị gbagooro otu a, nke ahụ bụ mmega ahụ dị iche yana nke ahụ na-arụ ọrụ. Yabụ ịchọrọ ịkwanye ya, ị ga - ahụkwa ebe akwara m na - arụ ọrụ ebe a. Wantchọrọ ịgbalite akwara a.
Ha chọrọ ịnwale ma gwerie ihe ọ bụla dị n'okpuru. Jide ya ihe dị ka sekọnd atọ ruo ise wee zuru ike. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere mmerụ ahụ ma ọ bụ nwee ihe mgbu, ị nwere ike afanyekwa ma ị nwere ike maa jijiji ntakịrị na quad a.
Nwere ike ị gaghị enweta nkwekọrịta zuru ezu dị ka nke a, nke ahụ dịkwa mma. Anyị na-arụ ọrụ na nke ahụ ugbu a, mana n'ikpeazụ ịchọrọ ịhụ nkwekọrịta ahụ. Ya mere, jide ya ọzọ ruo sekọnd atọ na ise. -eme ma eleghị anya iri reps.
Ọ dabere n'ezie n'ihe mmerụ ahụ gị bụ, otu tere aka gị dị na mmerụ ahụ gị, yabụ enweghị m ike inye gị ọnụ ọgụgụ ziri ezi. M ga - asị na ị na - ebido na iri, otu ma ọ bụ abụọ set nke iri, oge ole na ole n’ụbọchị, ma nwee ike isi ebe ahụ gawa. Ya mere, nke na-esote ya bụ eriri hamstring. na nke ahụ bụ ihe ọzọ isometric aga.
N'iji mkpịsị ụkwụ hamstring, oge a ị na-anwa ime ka akwara apata ụkwụ dị n'okpuru, ebe ndị a na-agafe nkwonkwo dum. ya mere quad na-agafe ya site na ijikọta ikpere ikpere, mana eriri ụkwụ gafere n'ezie nkwonkwo ikpere niile. Yabụ ịchọrọ ịgbalite nke a.
Chọrọ ime ka ndị mmadụ na-agagharị ọzọ, ma ịme ya nke ọma bụ ụzọ dị mma iji zuru ike. Yabụ ihe ị ga-eme bụ ịkọ ya. Ihe m na-eme ugbu a bụ ịkwanye n'ikiri ụkwụ ahụ n'ala. ma ka i nwee ike, ikwesiri inwe ike ime ka eriri m rụọ ọrụ ntakịrị n’ebe ahụ.
Ya mere, ọ bụ otu ihe ahụ, ị ​​pịa ala ruo ókè ị nwere ike, jide ya ihe dị ka sekọnd atọ ruo ise, wee zuru ike. Ya mere, ị na-agbanye ihu n'ihu ihe mgbu. Ọ bụrụ na ọ na-afụ gị ụfụ nke ukwuu mgbe ị pịrị apị, pịgharịa obere obere, ma ọ bụ ikekwe ị adịbeghị njikere maka ya naanị. ọzọ na otú ị na-amalite na ma eleghị anya, ihe dị ka iri, i nwere ike inwe ọganihu n'ebe ahụ.
Na-esote, a na-eji ikpere ikpere eme ihe. na ndị mmadụ si ärmelstern zitere m sọks ikpere ha. na otu onye a dị ezigbo mma.
Ọ bụ ya mere m ji nwee mmasị n'okwu a maka ọtụtụ ebumnuche, na otu n'ime ha karịsịa bụ na ejiri ihe dị egwu na-eku ume mee ya. Ọtụtụ aka uwe ndị ahụ bụ nke neoprene, na neoprene, ọ bụrụ naanị na ị yi uwe aka dịka nke a, ọ naghị ehichapụ ọsụsọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọsụsọ na ikpere gị, yabụ na ọ na-ekpo ọkụ nke ọma n'ebe ahụ, na nke ahụ bụ nnọọ ume iku ume. Ọ na-eguzogide isi ísì, yabụ mgbe ị jiri ya hichaa ọsụsọ na ụfọdụ ísì gị.
Ọ bụ ya mere ọ ji dị mma n’ezie n’ihi na ọ na-eku ume ọkụ ọkụ. na nke a bụ ihe dị m ezigbo mkpa n'ihi na m na-enwekarị obere anụ uche na ụdị ihe a na-adịkarị ka ọ na-arụ ọrụ kacha mma maka akpụkpọ m. ma o nwekwara nke a, m ga-atụgharị ya n’elu wee hụ ebe ọ dị ka idobe ya ebe. ya mere na-abụghị ileghara.
Yabụ na ọ nwere gel silicone iji jide ya n'ọnọdụ, ọ dịkwa ntakịrị ntakịrị ebe a, yabụ lee, ị ga - ahụ na ọ na - ejide ala karịa. Nke a na - egbochi ya ịgbada ụkwụ, nke dịkwa mma nke ukwuu. Ikpere ikpere na-adịkarị m mma, ha agaghị akwụsi ike.
Ọ bụghị orthosis, ọ gaghị echebe ikpere gị ka ị ghara ịga n'otu akụkụ ma ọ bụ nke ọzọ, mana ọ nwere mkpakọ ahụ. Na ihe mkpakọ na-eme bụ nnukwu ihe n'ihi na m na-akpọ ya amakụ. Ọ dị ka ịmakụ mgbe ọ dị gị ka ị na-enye mmadụ mmakọ, ọ na-adịkwa ezigbo mma. ọ na - enyere mmụba mgbasa na mpaghara ahụ, nke ahụ dị ezigbo mkpa n'ọtụtụ ụzọ. otu ọ na - enyere aka igbochi ọzịza ahụ.
Yabụ ọ bụrụ na ikpere gị fụrụ ntakịrị, ị nwere mkpakọ a nke na-eme ka ọzịza ahụ pụọ. ma mgbe ahụ ọ na - enyere aka na mmerụ ọ bụla dị na ya enweghị ọzịza na iyatesịt niile na - akpata mgbu na - aga n'ihu. Mkpakọ ahụ na-enyekwa aka ime ka mpaghara ahụ kpoo ọkụ.
Okpomoku a na - enyekwara aka ime ka akwara gbakọọ ikpere mgbe ị na - emega ahụ. Yabụ na ọ dị mma ịnwe ikpo ọkụ ebe a. ma enwere nkwado, ị maara na ọ bụghị nkwụsi ike ma ọ bụ enweghị nkwụsi ike, mana enwere nkwado ebe ọ na-ejikọ ya ọnụ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ikpere ikpere gị dị obere n'ihi na ọ nwere ike ịpị akaị ma ọ bụ ihe ọ bụla, nke ahụ na-akwado ya n'otu ebe iji wepụ ụfọdụ nrụgide ahụ. N'ihi ya, sọks ikpere na-amasị m nke ukwuu. Ihe kachasị amasị m bụ ihe atụ a n'ihi na o nwere ụfọdụ uru ndị ọzọ, mana ihe m masịrị ya bụ na ị nwere ike iyi ya mgbe ị na-arụ ọrụ ma gbatịa na ihe ndị yiri ya.
Nke a bụ ihe na mgbe ụfọdụ mgbe ị nọ na nnukwu nsogbu a ebe naanị ị nwere mmerụ ahụ gị, ị nwere ike iyi ya ụbọchị niile, mana n'onwe m agaghị m ejide ya ụbọchị niile. yikwasị ya mgbe ịchọrọ nchekwa. Ọ bụrụ na ịmara na enwere ihe ị ga - eme, ị nwere ike ịmara na ị na - eme egwuregwu ma ọ bụ na - eme mmega ahụ siri ike, mana maka iji ya kwa ụbọchị ọ nwere ike ọ bụghị ihe ịchọrọ ịme.
Mgbe ụfọdụ, mgbe ị nọ n'ọgwụgwọ ma ọ bụ oge ị na-achọ ịmalite ịmị ha n'ihi na ịchọrọ n'ezie ka akwara ndị ahụ rụọ ọrụ ahụ. ma n'ozuzu nke a bụ n'ezie naanị nkwado na enwere m mmasị na ya ma ị nwere ike ịhụ na ọ na-anọ ebe. Enwere m ike ịmara, gbagọọ ya ma megharịa ya, ọ gaghị amịgharị, mana ọ gaghị egbukwa mgbasa m. na soit na-eche n'ezie, ezigbo mma.
Ọ bụrụ na m pụọ ma mee ihe, enweghị m ike ịchọpụta na ọ nọ ebe ahụ n'ihi na ọ naghị egbochi, ọ ga-ezuru obere mma ahụ. Ya mere, maka agbatị ndị ọzọ anyị na-aga na mkpịsị ụkwụ hamstring. ya mere dika m kwuru na ị nwere ike iyi ya mgbe ị na - arụ ọrụ ma nnukwu ihe bụ na ọ naghị amịpụ ma daa ụkwụ gị.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-abanye na eriri hamstring / nwa ehi, ị nwere ike ịme njikọ yana ịgbatị ahụ iji chekwaa oge. Ọ bụrụ na ịchọrọ ya, ọ bụrụ na ị na-agbatị nwa ehi, gbalịa iweta eriri obere ụzọ na bọl nke ụkwụ gị. Ọ bụrụ na ịnweghị eriri dị otú ahụ, ịnwere ike iji ụdọ nkịta.
Nwere ike iji eriri, ma ihe ị nwere ike iji gbaa èbè na-arụkarị ọrụ nke ọma. Ga-edina ala. Yabụ ị nwere ike zuru ike wee jiri eriri kee ụkwụ gị. ya mere ọ ga-agbatị ụdọ gị, ma mgbe ị dọpụrụ ụkwụ gị, ọ ga-agbatịkwa ụmụ ehi gị.
Nke a bụ ihe na-akpali ịgbatị okpukpu abụọ. Ya mere, lee otu m si wedata onwe m ala, nke a bụ etu m si enweta nwa ehi m. na mgbe m rịrị elu, m ga-enweta mgbatị hamst ahụ n’ebe ahụ.
Yabụ naanị ị nwere ike ịbịa ebe a. Nke ahụ dị mma. Know maara na elu ị na-aga nke ọma, mana mgbe ikpere gị malitere ịmalite, ọ kwụsịrị ịgbatị.
Ya mere mgbe ikpere gị malitere ịgbatu na ị nọ ebe a, gbalịa weghachite ya ruo mgbe ị kwụ ọtọ, ma ọ bụghị na ị gaghị agbatị apata ụkwụ ndị ahụ mgbe ị na-ehulata ikpere gị ọzọ. Ya mere, jide ebe maka ihe dị ka 30 sekọnd. laghachi azụ wee mee nke a ugboro atọ.
Achọrọ m ikpere ikpere m maka nke a naanị n'ihi na ọ na-ewepụ m nrụgide n'azụ m, mana ịkwesighi. Fọdụ ndị mmadụ na-enwe mmasị ịhapụ ya ma nke ahụ dịkwa mma, n'ihi na onye na-esote anyị banye n'ime ya bụ usoro teepu IT. Maka nke a, ị ga-achọ iweta ụkwụ gị ntakịrị ma ọ bụ gbadata ala n'ihi na ị bụ ụdị ịlaghachi n'ime eriri hamstring, na-eme ka ụkwụ kwụ ọtọ, ma na-emegharị ya n'ahụ gị. ị kwesịrị ị na-eche ya niile ikpere gị na hip n'ihi na teepu IT ma ọ bụ TfL na-amalite ebe a na hip gị wee gbadata ma gafee ikpere gị, n'ihi ya, ọ dị ezigbo mkpa na nke ahụ agbatịkwara. na mgbe anyị na-echefu banyere ihe a IT gbalaga, ma ọ kpatara ọtụtụ nsogbu mgbe ọ bụ n'ezie uko.
Ya mere gbalịa ọzọ ọ bụghị naanị iweta ahụ gị dum kama naanị ụkwụ ahụ. yabụ ị ga - enweta gbatịa ahụ dị mma na ugboro ugboro maka 30 sekọnd site na ịme atọ n'akụkụ ọ bụla. Ya mere nke ikpeazu ga - abu o quad. na ọ bụ ya mere quadriceps ji dị ezigbo mkpa n'ihi na mgbe ọ na-esi ike ọ na-etinye nrụgide na ikpere ikpere wee tinye ya na nkwonkwo, nke na-egbu mgbu.
Ya mere, ị nwere ike ime nke a n'akụkụ gị ma ọ bụ na afọ gị. Mgbe ụfọdụ ọ na-amasị m ka ọ ka mma na afọ n'ihi na mgbe ahụ ọ na-akwado apata ụkwụ m n'ihi na ịchọrọ ka apata ụkwụ ahụ kwụ ọtọ, mana ị nwekwara ike ime ya n'akụkụ gị. Aga m eme ya n’akụkụ m ugbu a nanị iji gosi gị otu ọ bụla, mana aga m eme ụkwụ m n’elu ka m wee lelee gị ka m na-eme.
Mana ọ bụrụ na ọ bụrụ ụkwụ ahụ, m ga-achọ ya n’elu. Ọ bụrụ na ị na-eme ya n'akụkụ, ị ga-achọ ijide n'aka na akụkụ ahụ kwụ ọtọ. Mgbe m mụ anya ma na-agbazi ụkwụ m ma na-adọta ya, anaghị m agbatị quad m.
Ọ bụ ya mere m ji chọọ iweghachi ya, ma eleghị anya, ntakịrị. wee gbalịa ịdọrọ ikpere na ọdụ m. ugbu a, m na-N'ụbọchị nke abụọ.
Agaghị m etolite onwe m, naanị m na-agwa gị okwu, mana m ga-edina ala wee weta otu a. ya mere i nwere ike ihu ukwu m kwụ ọtọ, mana maka ndị ụjọ, ikekwe ọ bụrụ na ọ dị gị mma ịgbagharị na afọ gị mgbe ahụ ịkwesighi ichegbu onwe gị maka ibili ọtọ Lekwasị anya n'úkwù gị n'ihi na ọ gbadara n'ala ma enwere nsogbu adịghị. Nwere ike ịme mgbatị ndị a niile na mmega ahụ n'elu akwa gị ma ọ bụrụ na ịnwee nsogbu iguzo n'ala.
Ikwesighi ime ya n’elu ala. Nwere ike ime ya n'ihe ndina, ị nwere ike ime ya n'ihe ndina, ọ nwere ike ịbụ obere squishier, mana nke ahụ dị mma. Achọghị m ịrịgo n’ala ma enweghị ike isi n’ala bilie ọzọ.
Ya mere, jide nke a ọzọ maka 30 sekọnd ma mee nke a ugboro atọ. Ya mere ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbu n'akụkụ abụọ, mee ya n'akụkụ abụọ. ma oburu na obughi nke ahu. ya mere enwere gị ya.
Ndị a bụ ọgwụgwọ asaa kachasị mma m maka mgbu ikpere. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịzụrụ uwe elu ikpere aka a, jide n'aka ma pịa njikọ dị n'elu. ma echefukwala ịdenye aha site na ịpị ebe a n'okpuru. ma cheta, dị njikere, nwee anụrị ma nwee olile anya na ị ga-aka mma n’oge adịghị anya.
Kedu ụdị ọgwụgwọ anụ ahụ a na-eji maka mgbu ikpere?
Ha nwere ike ịkwado mmega ahụ dị mfe, dị ala, dị ka mbuli ụkwụ ma ọ bụ ịnyịnya ịnyịnya. Na-agbatịikpere, apata ụkwụ, na ụkwụ nwere ike jiri nwayọ weghachite usoro mmegharị gị iji na-mmerụ ahụọkwa, na ike apata ụkwụ na akwara ụkwụ nwere ike inyere aka ịkwadoikpere.
Usoro ọgwụgwọ anụ ahụ ọ nwere ike ime ka mgbu ikpere ka njọ?
Nke ato, ọ bụrụ na ị na-aga n'ime usoro mgbam ume gị oge ọ bụla ị na-emegharị tupu ịtọghe ihe owuwu gburugburu hip na nwa ehi, mgbe ahụ ị nwere ike mee ka ikpere ahụ dịkwuo ike - na nloghachi nwere ike-eme kanke giikpere mgbu ka njọmgbeọgwụgwọ anụ ahụ.
Ego ole ka ọgwụgwọ anụ ahụ na-efu?
Ego ole ka ọgwụgwọ anụ ahụ na-efuNa-enweghị Insurance? Ihenkezi ọnụnke ịnataọgwụgwọ anụ ahụenweghị mkpuchi ahụike bụ $ 75 na $ 150 kwa oge. N'ezieọnụahịaịkwụ ụgwọ na-adabere n'ụdị na ogo nke mmerụ ahụ. Kpụrụ ego maka ego maka otu nyocha nyocha bụ $ 150.
Kedu ka m ga - esi ete nkwonkwo m?
Nweta ha site na salmọn, ahịhịa, mmanụ oliv, akụ, ube bekee na ihe mgbakwunye na ụdị DHA nke omega-3s. Were ndị ankwonkwonchekwa. Ihe mgbakwunye nwere ngwakọta nke glucosamine sulfate na chondroitin nwere ike inye aka na ihu abụọ: Ha na-abawanyemmanuma belata mbufụt (wee si otú a nwee ihe mgbu). r.
Ije ije dị mma maka ikpere ikpere?
Na-eje ijena - ewuli ahụ gị ike ka ha wee nwee ike iwepụ nrụgide gị na nkwonkwo gị ma mezie karịa nke ibu ahụ n’onwe ha. Nke ahụ pụtara obere ihe mgbu maka gịikpere. Na-enyere aka ịkwụsị ibu. Maka paụnd ọ bụla i tufuru, nsogbu na nrụgide dị okpukpu anọ na nke gịikpere.Mkpebi 22 2016
Ọ ka mma ikpo ọkụ ma ọ bụ akpụrụ ikpere na ọrịa ogbu na nkwonkwo?
Maka nnukwu mmerụ ahụ, dịka akwara ma ọ bụ akaị merụrụ ahụ, nkwanye a na-emebu bụ ịmalite site na itinyeakpụrụiji belata mbufụt na dull mgbu. Ozugbo mbufụt agbadala,okpomọkụenwere ike iji mee ka ikwesi olu ike. Maka ọnọdụ mgbu na-adịghị ala ala, dị kaọrịa ogbu na nkwonkwo,okpomọkụyiri ka ọ na-arụ ọrụkacha mma.28 Jan. Dec 2019
Olee ot u m ga-esi gbuo ikpere m n 'uz o nd i mmad u?
Nri ndị nwere abụba siri ike gụnyere salmọn, trout, makarel, avocados, mmanụ oliv, almọnd, walnuts, na mkpụrụ osisi chia. Omega-3 fatty acids dị na nri ndị a ga-enyere akankwonkwo nkwonkwo. Mmiri nwere ike inye aka nankwonkwo nkwonkwo. Jide n'aka na ị na-a plentyụ ọtụtụ mmiri kwa ụbọchị iji hụ na gịnkwonkwodịmmanu.
Kedu ihe ọgwụgwọ anụ ahụ na-eme maka ikpere?
Ọgwụgwọ anụ ahụ na mmega ahụ maka ikpere. Usoro ọgwụgwọ anụ ahụ bụ naanị usoro mmega ahụ nke jiri nwayọ na-agbatị ma na-ewusi akwara na nkwonkwo ụfọdụ. Omume ị nwere ike ime bụ mmegharị ahụ dị nwayọ (mgbatị) emere iji weghachite mmeghari na ume na nkwonkwo gị yana iji kwalite usoro ọbara maka ọgwụgwọ.
Enwere mmega ahụ ị nwere ike ịme maka mgbu ikpere?
Mmekọahụ na-arụ ọrụ - Ahụ ike anụ ahụ maka KNIN PAIN essJessica na-akpọrọ gị gaa usoro mgbatị ahụ n'ụlọ maka ọtụtụ mmerụ ikpere na mgbu. Dịka onye na-agwọ ọrịa anụ ahụ, ndị a bụ mmega mgbu ikpere ọ na-enye ọtụtụ ndị ahịa ya nwere mgbu ikpere.
Kedu ihe m ga - eme iji nyere ikpere m aka OA?
Omume mgbanwe: Ebe ikpere OA na-eme ka o sie ike ịkwaga, mmegharị mgbanwe dị ezigbo mkpa. Ime ha oge niile nwere ike inye aka mee ka mgbatị dịkwuo elu, mee ka ikpere gị gbanwee, ma weghachite ọrụ nkwonkwo ikpere nkịtị. Omume mgbatị abụọ na mgbanwe mgbanwe dị mkpa ịme n'ihi na ha nwere ike inye aka wepu ikpere.